Momba anay - Indostria sy varotra Xiamen qundeli Co., Ltd.
Ny tantara ao ambadiky ny mpanorina sy ny tantaran'ny marika
Tamin'ny 2005, ny indostrian'ny kiraro an'i Shina dia nivelatra haingana, saingy tsy nitovy ny kalitaony, ary safotry ny tsinontsinona ny tsena ka tsy nahatratra ny fenitra kalitao. Taorian'ny fidiran'i Shina ny WTO, ny indostrian'ny varotra ivelany dia novolavolain'ny firosoana haingana, saingy ny kalitao tsara sy ny vidiny ambany amin'ny sininina vita sinoa dia notsikerain'ny mpanjifa vahiny noho ny fisian'ny vokatra vitsivitsy maloto. Tamin'ity fotoana ity rehefa notafihana ny lazan'ny marika sinoa, dia niara-nivory ny tanora vitsivitsy mitovy hevitra ao Jinjiang, renivohitry ny kiraro sinoa, ary nanangana kiraro Qunli, natokana hamokarana kapaoty nasionaly tsara kalitao sy lafo vidy hanomezana mpanjifa tsaratsara kokoa manao traikefa.
Qunli Shoes tamin'ny voalohany dia orinasa kely manokana amin'ny famokarana kapaoty EVA sy PVC. Tamin'ny fotoana voalohany dia namokatra kapaoty ambany ary namidy izany tamin'ny tsena any Afrika, Moyen Orient ary Azia atsimo atsinanana amin'ny alàlan'ny mpivarotra ao Yiwu sy Guangdong. Taty aoriana, niaraka tamin'ny fivelaran'ny tsena, dia namorona kiraro sy kapa zaridaina zohy EVA be dia be. Hatramin'ny 2011, ny orinasanay dia nandray anjara tamin'ny Canton Fair indroa isan-taona, izay nihaonanay tamin'ny mpanjifa ambony indrindra avy any Eropa, Amerika, Japon ary Korea miaraka amin'ny marika vahiny fanta-daza. Ny fitakian'ny mpanjifa amin'ny kalitaon'ny vokatra dia nihatsara hatrany ary ny vokatra isan-karazany dia nohamafisina tsy tapaka isan-taona, ary ny volan'ny filaharana koa dia nitombo hatrany.
Mba hahafahana mamaly tsara ny filan'ny mpanjifa, manamora ny fanondranana vokatra ary manitatra ny ambaratonga famokarana sy fampandrosoana ny orinasa dia nanangana tamin'ny 2015 Xiamen Qundeli Co. Nanangana ekipa mpivarotra raharaham-bahiny vahiny izahay, ekipa fampandrosoana ary ekipa fanaraha-maso kalitao hanompoana bebe kokoa ny mpanjifanay, ary afaka mamorona karazana vokatra isan-karazany arakaraka ny filan'ny mpanjifa samy hafa amin'ny tsena samihafa izahay, ary hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa sasany hamolavola tsy manam-paharoa lasitra manokana ho an'ny famokarana sy ny varotra manokana. ho an'ny mpanjifa. Ankehitriny, Xiamen Qundeli Co., Ltd. dia namorona orinasa mpamokatra, fanodinana ary fanondranana miaraka amin'ny kiraro Qunli ho ivon-toerana ary orinasa mpivarotra rahavavy toa an'i Wishauer sy Kukuijia mpiara-miasa aminy.
Ny vokatra dia haondrana any Alemana, Frantsa, Italia, Espana, Japon ary Korea Atsimo. Tao anatin'izay dimy taona lasa izay, ny orinasanay dia nanatsara tsikelikely ny mpanjifa any Azia atsimo atsinanana, Afovoany Atsinanana ary Amerika atsimo.
Manana ekipa R&D matihanina izahay, manenjika tsy tapaka ny endrika iraisam-pirenena sy ny hevitra vaovao. Taorian'ny fivelarana folo taona mahery, ny orinasanay dia lasa iray amin'ireo mpamatsy tsara indrindra amin'ny indostrian'ny kiraro any Jinjiang, ny tanànan'ny kiraro any Sina, ary ny kiraron'ny zaridaina sy kapa dia tsy manam-paharoa. Ny vokatray dia malaza any ampitan-dranomasina noho ny kalitaon'ny kilasy voalohany sy ny vidin'ny fifaninanana. Ny tsinontsinay sasany dia vita amin'ny akora vita amin'ny kiraro vita amin'ny kodiarana sy kiraro plastika tsara indrindra, mba hamoronana kapaoty ambony indrindra eran-tany.
Mba hahatratrarana ny fenitra iraisam-pirenena, ny vokatray dia nandalo ny fitsapana fanamarinana fiarovana ny tontolo iainana eropeana, ary ny orinasanay dia nandalo ny fanamarinana ny rafitra fitantanana kalitao BSCI sy ISO, manondrana kiraro avo lenta hatramin'ny 5 tapitrisa isan-taona. Mba hitondrana traikefa an-tongotra tsara kokoa avy any Jinjiang, Sina ho an'ny mpanjifa manerantany, ankoatry ny maodely famokarana ODM, ny orinasanay koa dia mamolavola fatratra fomba maody OEM hamokarana vokatra nahazoana alalana an'ny marika malaza eran'izao tontolo izao, toy ny SAFTY JOGGER, OXPAS, SOA FUNTOWN ary ny hafa marika malaza amin'ny kiraro miasa sy kiraro fiarovana, ary marika marika toy ny Disney, Spider-Man, Marvel ary Warner ihany koa. Ny mpiara-miasa maharitra eto aminay dia manerana an'izao tontolo izao, ao anatin'izany ny DEFONSECA any Italia, izay mifantoka amin'ny famokarana kapaoty sy kapa, ary ny marika iraisam-pirenena BATA, CORTINA, KAPPA, EMFILA, ary koa ireo orinasam-pandraharahana voalohany ALDI any Alemana sy Vondrona AUCHAN any Frantsa.
Miaraka amin'ny vokatra tsara sy serivisy faran'izay tsara, nahazo ny tian'ny mpanjifa eran'izao tontolo izao izahay, ary amin'ny alàlan'ny fitandremana azy ireo am-pitandremana ihany no ahafahantsika mioty mpanjifa mahatoky.
Amin'ny vanim-potoana taorian'ny valan'aretina, sarotra ny tsena iraisam-pirenena, fa ny orinasanay dia ho mpanohana matanjaka anao indrindra, ary miarahaba anao koa izahay izay liana hanatevin-daharana ny fianakavianay Qundeli lehibe.
Qunli Shoes Industry Co.Ltd. dia kiraro matihaninaorinasa SY mpanondrana mifantoka amin'ny fampandrosoana, fanamboarana ary fivarotana ny karazana isan-karazany Kiraro EVA ao anatin'izany ny EVA Slipper, kapa, kiraro an-jaridaina, kiraro tanana. Ny vokatray dia amidy tsara any Eropa, USA, Japon, ary firenena hafa na faritra manerantany.
Fitaovana voatokana R&D departemanta, Qunli Shoes dia manana ekipa fampandrosoana ho matihanina izay manana filozofia famolavolana iraisampirenena sy hevitra vaovao. aorian'ny fampandrosoana 16 taona, ny orinasantsika dia manana faritra iray 40,000 atrikasa metatra toradroa sy andalana famokarana 10 hahafahanay manome kiraro 800,000 tsiroaroa isam-bolana.
Ny vokatray rehetra dia nandalo ny fanaraha-maso henjana ny sampana kalitao. Ny kiraro Qunli dia nanangana ny marika manokana - "Qunli" taorian'ny fitantanana maharitra. Ny OEM sy ny ODM dia arahabaina fatratra.
Vina sy kolontsaina eo amin'ny orinasa
Io dia miorim-paka lalina amin'ny filozofianay mpandraharaha mba hanomezana kiraro ahazoana aina kokoa ny mpanjifa ary hahatonga ny olona hahatsapa fifaliana sy hankafy traikefa tsara kokoa rehefa mampiasa ny vokatra. Ny fahafaham-pon'ny mpanjifa no fenitra hitsapana ny kalitaon'ny vokatra. Henoy ny hevitry ny mpanjifa, fantaro ny zavatra ilain'izy ireo, farito ny fenitry ny kalitao ary ataovy izay rehetra azo atao mba hampitomboana ny fahafaham-po sy ny tsy fivadihan'ny mpanjifa. Isaky ny kiraro tsirairay dia manolo-tena hamorona ho avy tsaratsara kokoa izahay, tsy vitan'ny hoe mamokatra kiraro, fa mpiandry vavahady fahasambarana ho an'ny mpanjifa ihany koa.
Omeo vokatra sy serivisy matihanina, manome tolotra tsara kokoa ho an'ny mpanjifa, mamorona sanda ambony kokoa, avelao ny mpiara-miasa hanome toky, avelao ny mpanjifa hatoky.
Ho an'ny indostria
Nentanin'ny fangatahana henjana ny tenany, dia hiasa tsara izahay, fanavaozana mitohy, sahy mampiasa fomba sy teknolojia vaovao hanatsarana ny fahombiazan'ny asa, hanatsara ny serivisy, ary ho tonga orinasa manana ny toerany indrindra any Shina ary hanao mpamatsy kiraro manamboatra kiraro manerantany tena tsara. We eo an-dàlana hiezaka ny ho lasa mari-pahaizana indostrialy, hampiroborobo ny fandrosoana sy ny fampandrosoana ny sehatry ny kiraro, mitarika ny fironana lamaody.
Andraikitry ny orinasa
● Andraikitra ara-toekarena: Ny fandoavan-ketra araka ny lalàna no andraikitra lehibe indrindra amin'ny orinasa iray. Ny orinasanay dia manome lanja lehibe ny fandoavan-ketra orinasa, manara-penitra tanteraka amin'ny lalàna sy lalàna mifehy ny hetra eo an-toerana, manefa ny adidy amin'ny hetra, manao andraikitra ara-tsosialy ary mandray anjara amin'ny fananganana toekarena eo an-toerana.
● Andraikitra ara-tsosialy: Ny orinasanay dia mifantoka hatrany amin'ny fampiroboroboana ny asa ataon'ny mponina eo an-toerana, ny vehivavy, ny foko vitsy an'isa ary ny mpianatry ny oniversite, ary miezaka ny hampitombo ny fahafahan'ny asa eo an-toerana.
● Andraikitry ny tontolo iainana: Niezaka izahay ny hitady fitaovana ara-tontolo iainana sy biodegradable kokoa hanatsarana ny famokarana, hanao ny anjaranay hahatratrarana tany maitso. Raha ny kalitao dia miziriziry amin'ny fanaovana fanampiny izahay, ary amin'ny resaka fihenan'ny karbaona dia miezaka izahay ny manala. Eo amin'ny làlan'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fitsitsiana angovo dia nandray andraikitra izahay.
Manaraka hatrany ny fitsipiky ny "mifototra amin'ny olona" izahay, manaja sy mitandrina ny mpiasa tsirairay, miaro ary miaro ny zon'ny mpiasa sy ny zon'izy ireo ara-dalàna, mijery ny fivoaran'ny asa aman-draharaha sy ny fahasalaman'ny mpiasa sy ny sainy ara-tsaina ary miezaka izahay mba hamorona rafitra fizarana tombony eo amin'ny orinasa sy ny mpiasa.
Mikasika ny zon'olombelona, ​​ny orinasantsika dia mandray ny mpiasa mitovy hatrany amin'ny firenena sy faritra, foko, firazanana, miralenta, finoana ara-pinoana ary fiaviana ara-kolotsaina. Noraranay ny fampiasana ny fampiasana ankizy, ary lavinay ny karazana asa an-tery sy an-tery. Ny orinasanay dia mifantoka hatrany amin'ny fampiroboroboana ny asa ataon'ny mponina eo an-toerana, ny vehivavy, ny foko vitsy an'isa ary ny mpianatry ny oniversite, ary miezaka ny hampitombo ny fahafahan'ny asa eo an-toerana.
ALEMAINA: ALDI, ROSSMAN, HR GROUP
Frantsa: AUCHAN, BACKFOX
ESPAINA: SPRINTER, NICOBOCO, HELLWEB
Kiraro Jinjiang Qunli
Kiraro Jinjiang Kukujia
Kiraro Topshark Jinjiang